१६० वर्ष पुरानो यो फोटोमा लुकेको छ निकै डरलाग्दो कुरा, के तपाइँले देख्नुभयो ? – onlinedarpan:
Posted on November 4, 2018 Author onlinedarpanComment(0) 252 Views
एजेन्सी। सामाजिक संजालमा यस्ता कैयौं फोटोहरु पोस्ट गरिन्छन् जसले मानिसहरुलाई निकै असहज बनाउँछ । यस्तै एक फोटोले मानिसहरुलाई निकै त्रसित बनाएको छ । १६० वर्ष पहिले आयरल्याण्डको बेलफास्टमा खिचिएको यो फोटोलाई ध्यानपूर्वक हेर्दा मात्र यसको वास्तविकता थाहा हुन्छ ।
तस्वीरमा सुन्दर युवतीहरु क्यामेराको लागि पोज दिइरहेका देखिन्छन् । यो फोटोमा भएकी एक महिलाकी नातिनीले १६० वर्षपछि आफ्नी हजुरआमाको फोटो फेसबुकमा शेयर गरेकी थिइन् । नातिनीलाई यो फोटो निकै सामान्य लाग्यो तर मानिसहरुले यो फोटोमा यस्तो कुरा देखे जसका कारण फोटो भाइरल भयो।
यो फोटोमा भएकी एक महिलाको काँधमा एक हात छ । त्यो हात त्यहाँ भएका कसैको पनि होइन । कुनै बाहिरी मान्छे पनि त्यहाँ नदेखिएकोले यो हात कसको हो भन्ने प्रश्न अहिले चासोको विषय बनेको छ ।
Share4TweetGoogle+Pin04sharesकाठमाडौं। यदि तपाई कुनै नोकरीमा आवद्ध हुनुहुन्छ भने तपाईको काम गर्ने क्षमता दुई गुणाले वृद्धि भएर जान्छ जब तपाईको कार्यालय प्रमुखले तपाईसँग राम्रो व्यवहार गर्छ। क्वार्टर म्यागेजिनमा प्रकाशित एक अनुसन्धानले अमेरिकाका करिव ७५ प्रतिशत कामदारहरुको डिप्रेसनको मुख्य कारण उनीहरुको हाकिम भएको खुलासा भएको छ। हावर्ड विजनेश स्कुल र स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालयका शोधकर्ताहरुले गरेको २ सय भन्दा विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
Share53TweetGoogle+Pin053sharesविमला बज्राचार्य । छोरा होस् या छोरी, किशोरावस्थामा पुगेपछि बिस्तारै सबैको शरीरमा शारीरिक परिवर्तनहरु आउने गर्छन्। किशोरीहरुको हकमा कुरा गर्दा, उसको बढ्दै गरेको स्तन र परिवर्तन हुँदै गरेको उसको शारीरिक आकार प्राकृतिक प्रक्रिया हो। वास्तवमा महिलाको स्तन, यौनाङ्ग केवल शरीरका केही अङ्ग मात्र नै हुन्। प्राकृतिक रुपमा हरेक मानिसको यौनिकता, सृष्टिको एक प्रक्रिया हुँदाहुँदै पनि त्यही विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
Share27TweetGoogle+Pin027sharesकहिलेकाँही हाम्रो जीवनमा यस्तो हुन्छ कि हामी जीवनमा आफ्नो लागि एकदमै खुसी हुन्छौं । खुसीको बेला हामीले धेरै कुरा भुलिरहेका हुन्छौं, जसले जीवनमा दिर्घकालीन असर पुर्‍याउँछ । चाणक्य नीतिमा यस्ता धेरै जीवनपयोगी सन्दर्भहरु उल्लेख गरिएका छन् । यहाँ भने जवान महिलाले जवानीमा कहिल्यै भुल्न नहुने कुराहरुबारे उल्लेख गरिनेछ । १. शिक्षा सबैभन्दा असल मित्र हो विस्तृतमा पढ्नुहाेस्…
ईयरफोन बनिरहेको छ मृत्युको कारण, सबैले एकपटक पढनुस्!
यस्ता सकेंत देखिए तपाई चाँडै धनी बन्नुहुनेछ
मापसे गरी कुटपीट गर्ने वडाध्यक्षविरुद्ध सार्वजनिक मुद्दा